प्रचण्ड – नेपाल पक्षको विरोध प्रदर्शन शुरु हुँदै, यी रुट हुँदै अघि बढ्नेछ आन्दोलन ! « Lokpath
२०७७, ९ माघ शुक्रवार १०:३१
प्रचण्ड – नेपाल पक्षको विरोध प्रदर्शन शुरु हुँदै, यी रुट हुँदै अघि बढ्नेछ आन्दोलन !
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ माघ शुक्रवार १०:३१
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड – नेपाल पक्षले आज काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।
विरोध प्रदर्शनका लागि प्रचण्ड – नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमका लागि भेला हुन थालेका छन् । यसैकारण काठमाडौंको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
नेकपा प्रचण्ड – नेपाल समूहले आज बिहान ११ बजे काठमाडौँका विभिन्न १० स्थानबाट जुलुस निकालेर प्रतिनीधिसभा विघटनको विरोध गर्ने जनाएको छ।
विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न युवा, विद्यार्थी, मजदुर र खेलकुद मोर्चाका दुई हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले लोकपथसँग बताए । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री र राष्टपतिविरुद्ध अमार्यादित नारा लगाएर आलोचित बन्न पुगेको समूहले यसपटक सो गल्ती हुन नदिन सभालाई पनि व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको छ । संयोजक श्रेष्ठले थपे, ‘विरोध प्रदर्शन र सभा मर्यादीत बनाउनका लागि बुधबार सात बुँदे निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ ।’
संघर्ष समितिले पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गाीय संगठन, मोर्चालगायत सांगठनिक संरचनाहरूलाई सभामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजित विभिन्न स्थानबाट नेता तथा कार्यकर्ता काठमाडौं आएका छन् ।
सबै जुलुस रत्नपार्कमा जम्मा भइ मूल जुलुसमा परिणत हुनेछ भने त्यहाँबाट रत्नपार्क – बागबजार, पुतलीसडक–भद्रकाली–भोटाहिटी हुँदै सभामा परिणत हुने केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।